Iibso Norethisterone acetate Powder (51-98-9) hplc≥98% | AASraw
AASraw waxay la jirtaa awood iyo soosaarid laga bilaabo gram ilaa amar tiro ee Norethisterone acetate Powder (51-98-9), oo hoos timaada qaanuunka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada tayada la socon karo.
Norethisterone acetate Powder (51-98-9) fiidiyaha
Norethisterone acetate Powder (51-98-9) SNadiifinta:
Qaab dhismeedka kiimikada: Product Name: Norethisterone acetate (NETA)
Formula kelli: C22H28O3
Miisaanka kelli: 340.46
kaydinta: Ku keydi 2-8 ° C.
Norethisterone acetate Powder (51-98-9) Dqorey:
Norethindrone Acetate, USP (17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate), hoormoon firfircoon, oo ah firfircoon afka ah, waa acster acid ester ee norethindrone. Waa caddaan huruud-cagaar ah, budada kirismaska.
Norethisterone acetate (NETA), oo sidoo kale loo yaqaan norethindrone acetate laguna iibiyo magaca 'Primolut-Nor' iyo kuwa kale ayaa ah dawada progestin. Daawadan waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo endometriosis, dhiig baxa uterine-ka ee ay ka yimaaddaan heerarka hoormoonka aan caadiga ahayn, iyo amenorrhea Second. Amreoriyad labaad (Second amenorrhea) waa marka haweeneyda ay joojiso inay caadada ka baxdo heerarka hoose ee hoormoonka dumarka qaarkood.
Norethindrone waa nooc hoormoonka dumarka (progestin). Waxay la mid tahay hormoonka 'progesterone' ee jidhkaaga sameeyo si dabiici ah. Dawadani waxay ku shaqaysaa joojinta koritaanka caadiga ah ee xuubka ilmagaleenka inta lagu jiro wareegga caadada iyo tilmaamida isbedelka hoormoonka ilmo galeenka si loo soo celiyo caadada caadiga ah ee caadada.
"[Email ilaaliyo]: Daawooyinka la Oggolaaday ee FDA ”. Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka. Waxaa la soo celiyay 6 Disembar 2016.
James M. Rippe (15 Maarj 2013). Daawada Nolosha. CRC Press. p. 280– ISBN 978-1-4398-4544-8.
Gibian H, Kopp R, Kramer M, Neumann F, Richter H (1968). “Saamaynta cabirka walxaha ee dhaqdhaqaaqa bayoolajiga ee norethisterone acetate”. Acta Physiol Lat Am. 18 (4): 323-6. PMID 5753386.